5 सबैभन्दा रहस्यमय ठाउँमा युरोप मा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5सबैभन्दा रहस्यमय ठाउँमा युरोप मा
5 सबैभन्दा रहस्यमय ठाउँमा युरोप मा
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा इटाली, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, ट्रेन यात्रा सल्लाह, यात्रा युरोप
युरोपेली महाद्वीप छ एक को पूर्ण धनी इतिहास, उल्लेखनीय कथाहरू, साहसिक, र कहिलेकाहीं एक रहस्य. हरेक महादेश को आफ्नो सेट छ mystifying स्थानहरु. तथापि, यो देखिन्छ कि युरोप केही छ सबैभन्दा अचम्मको र रहस्यमय संसारमा ठाउँमा. रहस्य सधैं भएको छ एक अपील गर्न adventurous यात्री. त्यसैले, यो कुनै आश्चर्य रूपमा आउँछ किन अधिक daring यात्री बनाउन यो आफ्नो लक्ष्य यी ठाउँहरूमा भ्रमण गर्न. एक ट्रेन सेव सँगै राख्नु भएको छ एक सूची को पाँच सबैभन्दा रहस्यमय ठाउँमा युरोप मा निश्चित हो कि छक्क पार्नु र प्रभावित पनि सबैभन्दा अनुभवी को यात्री.
1. सबैभन्दा रहस्यमय ठाउँमा नेदरल्याण्ड – Giethoorn
पहिलो स्थानमा हामी सिफारिस गर्न सक्छन् रहस्यमय छ कि अर्थमा यो एकदम अनुपम छ. यो स्थित छ मा नेदरल्याण्ड र छ एकदम संभवतः सबैभन्दा सुखद ठाउँमा तपाईं यात्रा गर्न सक्छन्. Giethoorn एक गाउँ छ कि कुनै अन्य जस्तै छ. धेरै रूपमा यो विचार सिद्ध getaway from आधुनिक जीवन. यो कुनै सडक र शायद कुनै पनि जीवित मान्छे मा यो. वास्तबमा, यो प्रकारको छ cut off from the rest of the Netherlands.
खर्च समय मा Giethoorn बनाउन हुनेछ तपाईं महसुस भने तपाईं बायाँ आधुनिक विश्व र यसको समस्याहरूको पूर्ण. समय द्वारा उड हुनेछ, र तपाईं पूर्ण महसुस गर. जहाँसम्म रूपमा हेर्न र महसुस of the गाउँ जाने, पहिलो कुरा तपाईं याद हुनेछ छ कसरी सानो छ. तपाईं पनि सूचना छन् कि धेरै केहि सडक लिन. वास्तबमा, त्यहाँ हुनेछ तरिका अधिक नहरहरुमा र डुङ्गा सवारी उपलब्ध भन्दा सडक ट्रेक. घर गाउँ मा तपाईं दिनेछु एक पुरानो विश्व vibe.
2. Eisriesenwelt बरफ गुफाहरु
गर्नुपर्छ तपाईं कहिल्यै मा आफैलाई पाउन, Austria, you must योजना एक यात्रा को एक ठूलो प्राकृतिक आश्चर्य अवस्थित कि. Eisriesenwelt छ को एक ठूलो बरफ गुफाहरु मा अवस्थित कि दुनिया. वास्तबमा, जब अनुवाद गर्न अंग्रेजी, यो मतलब संसारको दिग्गज को. मा Stepping, यो अनौठो गुफा बनाउन हुनेछ तपाईं महसुस भने तपाईं को सेट मा एक पृथ्वीबाहिर अन्य ग्रहहरूमा चलचित्र. छन् धेरै छन् भन्ने कुरा आश्चर्यजनक बारेमा Eisriesenwelt.
पहिले, को सरासर आकार बरफ गुफा नै छोड्न हुनेछ तपाईं श्रद्धा. माध्यम ले जा यो लिन सक्छन् तपाईं लगभग एक घण्टा र एक आधा गर्न पूरा. दोश्रो, को भित्री गुफा छोड्न हुनेछ तपाईं खुर्सानी र प्रभावित. धेरै बरफ संख्या, बरफ मूर्तिहरु, र बरफ पर्खालहरु एकदम प्रभावशाली छन् र छोड्न धेरै गुमाएका शब्दहरू लागि. यी केही विशाल बरफ formations हो भन्दा taller 20 मीटर! मा अँध्यारो को गुफा, बरफ द्वारा उज्यालो म्याग्नेशियम दीपक हुनेछ “जीवित आउन.” रूपमा प्रकाश माध्यम जान्छ प्रकाश र नृत्य मा पृष्ठभूमि, यस अर्थमा प्राकृतिक रहस्य निश्चित तपाईं मारा. निश्कर्षमा, कसैलाई नजिकै Werfen, Austria गर्न आवश्यक समय लिन भ्रमण गर्न Eisriesenwelt.
Salzburg गर्न Werfen गाडिहरु
म्यूनिख गर्न Werfen गाडिहरु
इंसब्रुक गर्न Werfen गाडिहरु
भियना गर्न Werfen गाडिहरु
3. सबैभन्दा रहस्यमय ठाउँमा भ्रमण गर्न इटाली – Capuchin यस्तो पालेर्मो
को Capuchin यस्तो पालेर्मो पठाउन सक्छन् एक काप्नु तल आफ्नो ढाड. लागि thrill seekers भनेर आनन्द को भाव आतंक र श्रद्धा, यो यस्तो एक उत्कृष्ट स्थान भ्रमण गर्न. यी catacombs छन् shrouded by रुग्णता र रहस्य दैनिक मानिस. यो लिन्छ सबै छ, एक यात्रा गर्न आफैलाई पाउन posing केही ठूलो जीवन प्रश्नहरू.
पछि कथा Capuchin यस्तो छ एकदम आकर्षक. यो अन्तिम घरबार ठाँउ लागि रहेको मान्छे हजारौं को देखि, जीवनको सबै हिँड्नुभएको. बहुमत मा यस्तो monks छन्, र धनी को समय. तथापि, त्यहाँ केही साधारण मान्छे साथै त्यहाँ. यो catacomb stretches अन्तर्गत एक मठ र एक नजिकको चर्च. माध्यम हिँडिरहेका को गलियारों को catacombs, तपाईं देख्न हुनेछ लगभग 8000 mummified शरीर. यी केही एकदम पुरानो, पनि फिर्ता डेटिङ गर्न 1600s. को embalmed शरीर र राम्रो संरक्षित. निश्कर्षमा, रूपमा आतंकित गर्नु रूपमा यस्तो लाग्न, तिनीहरूले एक हो लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्य र छन् एक यात्रा लायक कि उन को लागि, यो लाग्न सक्छ.
Marsala गर्न पालेर्मो गाडिहरु
Bagheria गर्न पालेर्मो गाडिहरु
ट्रापानी गर्न पालेर्मो गाडिहरु
को Chateau de Brissac छ को दक्षिण मा Angers, एक शहर मा लयर नदी उपत्यका. यो सबैभन्दा अग्लो महल मा सारा को फ्रान्स. यो सुन्दर फ्रान्सेली महल थियो पुनर्निर्माण मा, यो 15 सताब्दी र परीक्षण भइरहे छ समय. पहिले यसको नवीकरण को ड्यूक द्वारा Brissac, यो थियो मध्ययुगीन महल भनेर फिर्ता दिनांक 11 औं शताब्दी. तथापि, ड्यूक reconstructed मा यो एक महान् Renaissance शैली महल.
Chateau de Brissac लाग्न सक्छ, जस्तै, एक साधारण Chateau मा पहिलो. तथापि, पछि दैनिक facade, त्यहाँ एक रहस्यमय लिजेन्ड ड्राइव धेरै भ्रमण गर्न यो. धेरै भूत कथाहरू संग सम्बन्धित छन् मैदान र chateau नै. सबैभन्दा लोकप्रिय लिजेन्ड हरियो महिला. यो लिजेन्ड अनुसार त्यो हत्या भएको थियो महल मा कहिलेकाँही मध्य 15th century. ला Dame Verte, वा त्यो रूपमा लोकप्रिय भएको छ, हरी महिला, छ भने roam महल अझै. धेरै भन्न चितकबरा छन्, एक महिला मा एक हरियो पोशाक माध्यम हिँडिरहेका को मैदान वा माथि खडा, को टावर. हालको बासिन्दा भन्न सकेका छन् accustomed उनको, तर धेरै पर्यटक डर छ. Apart from देखेर उनको, धेरै भन्न सुन्न सक्नुहुन्छ, उनको moans भर महल को प्रारम्भिक घन्टा मा बिहान.
पेरिस मैंस गाडिहरु गर्न
पेरिस गाडिहरु गर्न नेन्टस
पेरिस रेनेस गाडिहरु गर्न
रोयुन गर्न Paris गाडिहरु
5. सबैभन्दा रहस्यमय ठाउँमा भ्रमण गर्न मा बेल्जियम – Dinant
Dinant अर्को सानो शहर भनेर प्रेरित रहस्य एक अर्थमा गर्न आगंतुकों. शहर मा Namur प्रान्त को बेल्जियम. यो सही ठाँउ हो गर्न जान योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने एक सप्ताह getaway from ठूलो शहर जीवन. संयोजन को शहर जीवन र आसपास प्राकृतिक परिदृश्य छ लुभावनी. पहाडहरू मा पृष्ठभूमि को शहर संग संयुक्त नदी Meuse माध्यम बगिरहेको शहर हो गर्न पर्याप्त सक्षम कसैलाई फिर्ता खेलेकै गर्न र unwind. यो हृदय कब्जा धेरै आगंतुकों र तपाईं बनाउन हुनेछ जस्तै महसुस तपाईं अर्को संसारमा.
ब्रसेल्स गर्न Dinant गाडिहरु
एंटवर्प गर्न Dinant गाडिहरु
घेंट गर्न Dinant गाडिहरु
Liege गर्न Dinant गाडिहरु
Are you ready to हेर्न धेरै रहस्यमय भन्ने ठाउँमा युरोप प्रदान गर्दछ? सुरु संग यी पाँच सबैभन्दा रहस्यमय ठाउँमा र देख्न जहाँ सडक तपाईं लिन्छ. सुनिश्चित गर्न योजना, आफ्नो छुट्टी को राम्रो र पुस्तक रेल टिकट मा सुरक्षित एक ट्रेन समय!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 सबैभन्दा रहस्यमय ठाउँमा युरोप मा” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-mysterious-places-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, र तपाईं / डे गर्न / tr वा / यो र अधिक भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
#रहस्यमय #रहस्यमय स्थानहरू europetrains europetravel eurotrip trainjourney
ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, रेल यात्रा चेक गणतन्त्र, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्पेन, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, ट्रेन यात्रा सल्लाह, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
प्रविधि र यात्रा